Taariikhda My Butros » Best Talooyin Taariikhda First for Men
Taariikhaha ugu horreeya waxay noqon karaan kuwo neerfaha xidha. Malaha dhowr su’aalood ayaa maankiisa ka dhex guuxaya hadda. Sidee buu isu qaadaa? Xagee buu geeya iyada? Muxuu ka hadlayaa? Isdeji, waa wax caadi ah in la dareemo murugada walwalka taariikhda-hore. Si kasta oo ay u noqoto, helitaanka taariikhdaas taariikhihiisa ayaa ahayd guul. Caqabada ugu horreysa ayaa ka dambeysa isaga oo hadda wuxuu diiradda saari karaa abuurista khibrada taariikhda ugu wanaagsan ee labadoodaba.
Aragtida koowaad waa wax walba, qaasatan haduu ninku raadinaayo lammaane mustaqbalka-dheer iman kara. Iyadoo aan loo eegin sida uu ku degay taariikhdaas koowaad (shukaansi apps, fasalka, saaxiibbo wadaag ah, wax kasta oo ay noqon karto), waxaa jira talooyin gaar ah oo uu ku qasban yahay inuu maanka ku hayo si uu u abuuro aragti waara - kuna qasbo inay tiraahdo “haa” taariikhda labaad.
Go'aami Goobta Taariikhda Kahor
Hadduu iyada kula xiriirinayo qoraal ahaan, waa muhiim in marka hore waxyaabaha qaarkood laga wada hadlo. Wuxuu bilaabi karaa wadahadal ku saabsan hiwaayadeeda iyo xiisaheeda isla markaana uu ogaado waxa ku habboon goobta ugu horreysa ee ay ahaan lahayd. Waxa ugu dambeeya ee labada dhinacba ay rabaan waa inay ku dhagaan meel aan raaxo lahayn. Xaaladdu waxay jeceshahay burburkaan wixii dhici karay inay noqdaan taariikhda ugu horreysa ee cajiibka ah. Waxay ku fiicnaan kartaa casho iyo filim, laakiin dumar badan ayaa maalmahan door bidaya wax xoogaa xiiso badan. Xitaa waxaa jira sheekooyin ku saabsan taariikhaha xiisaha leh ee safafka toogashada! Waxa ugu weyn ee la xasuusto waa in la helo waxqabad ay labada dhinacba ku raaxaystaan ​​isla markaana abuuraan khibrad isku xidhan.
Muuqaalka ayaa la tiriyaa. Had iyo jeer u labiso si aad u cajab geliso. Tan culeys lama saari karo. Ma jiro wax ka weyn oo loo xidho haweeney si ay u aragto taariikhdeeda oo ka muuqata makhaayad Faransiis oo heer sare ah oo ku jira shandado gaaban. Quruxda gudaha sidoo kale waa la tiriyaa, Dabcan, laakiin waxaa muhiim u ah inuu tuso inuu si dhab ah u qaato iyada oo loo labbisan yahay munaasabadda munaasabadda. Waxay muujineysaa inuu qiimeeyo waqtigeeda iyo shirkadeeda. Oo intuu isagu ku jiro, waa inuu sidoo kale hubiyaa inuu sifiican isku hagaajinayo. Iska yaree ciddiyahaas, shanlee timahaas, oo ur fiican.
Noqo Mid ilaaliya waqtiga
Wakhtiga. Tani waxay u egtahay talo guud oo meel walba khuseysa, laakiin gaar ahaan waa run halkan. Ma jiraan wax cay ah oo ka badan soo noqoshada taariikh nus saac ah oo la daaho oo la kala baxo. Soo ogow meesha ay si fiican u socoto ka hor oo qorshee safarkaaga sida ugu habboon. Xitaa wax yar ka tag haddii ay suurta gal tahay. Yimid 15 daqiiqado hore taariikhda ayaa ka caawin kara inuu sameeyo xoogaa diyaar garow ah sida raadinta miiska ugu fiican. Inaad waqtiga ku timaadid ayaa sidoo kale astaan ​​u ah dhaqan wanaag. Natiijada ugu xun ee ugu macquulsan ayaa ah iyada inay u maleyso in la istaagay. Tus iyada in chivalry aysan wali dhiman!
Noqo Dhageyste Wanaagsan
Weydii su'aalo oo si taxaddar leh u dhageyso si aad si fiican u baratid iyada. Taariikhda koowaad waa fursadda ugu fiican ee lagu baran karo iyada. Waa inuu sameeyaa wax walba oo uu ku ilaalin karo diiradiisa kaligeed. Tani waxay ka dhigan tahay inuu taleefankiisa iska fogeeyo iyo inuu isha ku hayo. Nood iyo dhoola cadee oo ogeysii in la dhageysanayo. Hadalkeeda iskiis ah waa qaabkeeda ay ugu ogeysiinayso waxa ay ku saabsan tahay waana muhiim in fiiro gaar ah loo yeesho. Isaga kaliya uma sameynayo iyada xusuus, isaguba naftiisa ayuu sameynayaa. Waa inuu ogaadaa waxa ku dhiirrigeliya iyada inay go'aamiso haddii ay ku habboon tahay isaga.
Joogtee Wadahadal Hawlgal ah
Wadahadalka wanaagsan had iyo jeer waa soo jiidasho leh. Kaliya ma ahan dhageysiga hadalkeeda si sharaf leh, waxay ku saabsan tahay abuuritaanka gadaal iyo gadaal macno iyo xusuus mudan. Waa inuu diyaariyaa liistada su'aalaha kahor si uu si hufan ula falgalo. Hadduu u janjeero inuu si aan toos ahayn uhadlo ama si aan fiicnayn u hadlo, tani waxay noqon kartaa hab fiican oo looga fogaan karo dhibaatooyinkaas. Sidoo kale waa inuu cabbiraa waxa ay u janjeeraan inta lagu jiro taariikhda. Dumarka oo dhami isku mid ma aha waxa ugu xun ee la sameeyona waa in guud la sheego. Haweenka qaar waxay doorbidaan inay sheekada ka dhigaan mid fudud oo heer dusha ka gaar ah. Ka hadal reerka, asxaabta, iyo xayawaanka guryaha lagu haysto. Ama filimo iyo muusig. Haweenka kale waxay rabaan inay si qoto dheer u milicsadaan. Falsafada, farshaxanka, iyo dhacdooyinka hadda jira waa mowduucyo kooban oo qotadaada wada hadalka. Isku day inaad ka fogaato diinta ama siyaasadda.
Ha Ka Hadal Exes
Kaliya ha sameyn. Iyadoo ay muhiim tahay in la barto midba midka kale taariikhda shukaansiga, waa marwalba fikrad xun in lagu qoro exes. Ka fogow inaad si ballaaran wax uga weydiiso taariikhdeeda galmada. Tani waxay ka dhigi kartaa inuu u soo baxo sidii mid caqli badan, xakamaynta, oo laga yaabo inuu yahay qof nafsaani ah. Dhinaca kale, maahan inuu ka duulo waxa ku saabsan sida uu ahaa qofkiisii ​​ugu xumaa adduunka. Tani waxay si cad u muujineysaa inuusan dhaqaaqin, mana jirto haweeney maskaxdeeda saxda ah rabto inay dhex gasho qof sidaas oo kale ah. Ka dhig mid heer sare ah, ragga!
Xushmee Xuduudaha Shakhsiyeed
Waa inuu ilaaliyaa aura dabacsan oo fahmaa aasaaska muuqaalka jirka, iyo fariimaha subliminal-ka ah ee uu si aan ula kac ahayn u dirayo. Hadday tahay taariikh filim, ma ahan inuu isku dayo khiyaanadii hore ee gacan-ka-garabka markii ugu horeysay. Dumarku sida caadiga ah waxay ragga u muujiyaan xiisahooda iyagoo taabanaya gacmahooda ama qaababka kale ee taabashada jirka. Fahmaan sida ay u dareemeyso booska shaqsiyeed una ixtiraam ra'yigeeda. Waxba ma dhahayo 'wax cabsi leh' marka loo eego helitaanka gacanta iyo qabsashada goor dhow.
Ku adkeyso Kala Bixinta Sharciga
Tani waxay u badan tahay inay noqon doonto muran muran leh, laakiin waa inuu had iyo jeer ku adkaystaa inuu biilka kala qaybiyo. Ka hadal tan ka hor una ogeysii si hoose iyadoo la filayo inay bixiso qaybteeda biilkan. Xusuusnow ragga, ma ahan wax raqiis ah in laga filo qof inuu isagu iska bixiyo. Wax weyn ha ka dhigin, kaliya sii ogeysii iyada. Sidaas, iyada waqti ayey la qaadataa maxaa yeelay waxay ka heshay shirkadiisa mana aha inay dareensan tahay inay waajib tahay. Haweenka si toos ah uga filan ragga inay biilka ka qaadaan markii ugu horreysay waxay u muuqdaan kuwo xaq u leh ama dareen ahaan aan la heli karin. Tani waa calan weyn oo casaan ah oo uu u baahan yahay inuu ogaado. Iyadu ma samaynayso iyada raalli ah iyada oo la baxay isaga, iyadu halkaas bay u joogtaa maxaa yeelay iyadaa jeceshahay.